Wasiirkii dib u dhiska dalka Japan oo iscasilay kadib cadaadis uga yimid xukuumadda – SBC
Wasiirkii dib u dhiska dalka Japan oo iscasilay kadib cadaadis uga yimid xukuumadda
Tokyo:- wasiirkii dib u dhiska dalka Japan ninka lagu magacaabo Rio Mansomoto ayaa shaaca ka qaaday in uu xilkii iskacasilay kadib toddoobaad oo hayey jagadaas.
Talabadan ayaa ka dambeysay eedeeno ay u soo jeediyeen guddoomiyaasha gobolada ay waxyeelada ka soo gaartay dhul giriirkii iyo mowjadihii Sunaamiga ee ku dhuftay dalka Japan bishii Maarso ee la soo dhaafay iyo wixii kadhashay musiibadii wershada Nuclear-ka Fokoshima.
Matsomoto ayaa gaarsiiyey gudoomiyaasha gobolada in xukuumaddu aysan siin doonin taageero maaliyadeed haddii aysan si wanaagsan u soo gudbin warbixino ku aadan dib u dhiska deegaanada ku waxyeeloobay musiibadaas.
Dadka u kuurgala siyaasadda ayaa sheegaya in iscasilaadda wasiirku ay sii kordhin doonto cadaadiska xukuumadda ra’iisal wasaare Nawto Kan kaai oo ay yaraatay shacbiyada xukuumadiisa kadib musiibooyinkii kadhacay dalka Japan.
Ra’iisal wasaaraha Xukuumadda Japan ayaa ka badbaaday bishii la soo dhaafay inuu waayo kalsoonada Baarlamaanka kadib mooshin ay soo bandhigeen xildhibaano ka soo horjeeda habka ay xukuumaddu u wado howlaha dib u dhiska deegaanada ku waxyeeloobay dhul giriirka iyo Mowjadaha Sunaamiga.
Ra’iisal wasaaraha Japan ayaa ku dadaalaya sidii uu ugu qncin lahaa barlamanka in uu ogolaad lacag dhan 25 bilyan oo dollar iyo maalgelin dheeraad ah howlaha dib u dhiska deegaanada waxyeeloobay.